ဝက်ခြံတွေတိုင်း ကုသနည်းကအတူတူပဲလား.......... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » အလှအပ » ဝက်ခြံနှင့် အသားရေထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ » ဝက်ခြံတွေတိုင်း ကုသနည်းကအတူတူပဲလား……….
လူတိုင်းလိုလိုမှာဖြစ်နေတဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်ရပ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ဝက်ခြံပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဝက်ခြံပျောက်ချင်လို့ ဝက်ခြံပျောက်နည်းဆိုတိုင်း လိုက်လုပ်နေပေမယ့် မပျောက်တာကြောင့် စိတ်ပျက်နေသူတွေရှိလား၊ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော်။
Whiteheads ဝက်ခြံ – အရေပြားအောက်ဘက်မှာရှိနေတတ်ပြီး အရမ်းမကြီးတဲ့ ဝက်ခြံအမျိုးအစားပါ။ ညှစ်လိုက်တဲ့အခါ အဖြူရောင်အနှစ်လေးတွေထွက်တတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းဘေးတဝိုက်နဲ့ မေးစေ့မှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဝက်ခြံအမျိုးအစားအလိုက် ကုထုံးကလည်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
Whiteheads ဝက်ခြံအတွက် ကုထုံး –တစ်နေ့ကို မျက်နှာကို ၂ ကြိမ်ကနေ ၄ ကြိမ်အထိသန့်စင်ပေးပါ။ မျက်နှာပေါ်က အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ပြီးရင်တော့ မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေကို မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကို ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ထားတဲ့အနှစ်လေးလိမ်းပေးပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ထားပြီးရေစင်အောင်ဆေးချပေးပါ။
Blackheads (ဆားဝက်ခြံ)အတွက် ကုထုံး –ရေနွေးငွေ့ခံပေးပါ။ စက်ဝိုင်းပုံစံအတိုင်းနှိပ်နယ်ပေးပြီး ဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါ။ အစိုဓါတ်ထိန်းခရင်မ်လူးပေးပါ။
Papules ဝက်ခြံအတွက် ကုထုံး – ဒီဝက်ခြံအမျိုးအစားအတွက်ခရမ်းချဉ်သီးက အဆင်အပြေဆုံးပါ။ မျက်နှာကို သန့်စင်ပြီးရေခြောက်အောင်သုတ်ပေးပါ။ပြီးရင် မျက်နှာကိုခရမ်းချဉ်သီးအရည်လေးတွေလိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၃၀လောက်ထားပြီးရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချလိုက်ပါ။
Pustules ဝက်ခြံအတွက် ကုထုံး –ရှားစောင်းလက်ပပ်ကိုအသုံးပြုပေးပါ။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် မျက်နှာကို သန့်စင်နေအောင်သစ်ပြီး ရှားစောင်းလက်ပပ်လိမ်းလို့ အိပ်ပေးပါ။ မနက်နိုးတဲ့အခါ မျက်နှာသစ်ချလိုက်ပါ။
Nodules ဝက်ခြံအတွက် ကုထုံး –ဝက်ခြံပေါ်မှာ benzoyl peroxide ဒါမှမဟုတ် salicylic acid ကိုသုံးပေးပါ။ အဆီတွေကို သိသိသာသာလျော့ပါးစေမှာပါ။
Cysts ဝက်ခြံအတွက် ကုထုံး – ဒီဝက်ခြံကတော့ အိမ်တွင်းကုထုံးထက် တတ်သိနားလည်တဲ့အရေပြားဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသကြည့်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ကဲ…ကိုယ့်ဝက်ခြံအမျိုးအစားကို အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်လို့ ကိုက်ညီတဲ့ကုထုံးလေးနဲ့ ဝက်ခြံသက်သာအောင်ဂရုစိုက်လိုက်ပါနော် Helloဆရာဝန် ပရိသတ်ကြီးရေ……………….
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 9, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 9, 2019
Types of Acne and How to Treat Themhttps://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/types-of-acne Accessed Date9September 2019